TTSweet: ပုဇွန်ချဉ်လော ... ဖက်လေလော ...
မနေ့က ပင်နင်စူးလားဘက်ရောက်လို့ ပုဇွန်ချဉ်လေး ၀ယ်လာခဲ့တယ်။
ဒီနေ့မနက် ထမင်းပူပူလေးဆီဆမ်း၊ ပဲပြုတ်လေးဖြူးပြီး စားမယ်လုပ်တော့ ပုဇွန်ချဉ်သတိရတာနဲ့ သုတ်ဖို့ အထုတ်ကို ဖြည်လိုက်တာ ကွမ်းတစ်ယာညက်ခန့် ကြာသောအခါ ... မည်သို့လုပ်လိုက်သည်မသိ ။ အောက်ကပုံအတိုင်း ဖြစ်သွားပါတယ် ခင်ညာ။
ပရိတ်သတ်ကြီး မျက်စေ့လည်နေမှာစိုးလို့ ပုဇွန်ချဉ်ထုတ် ဖြည်ပုံဖြည်နည်း အဆင့်ဆင့် Manual ကို ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
၁-ဆိုင်ကထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ ကြွပ်ကြွပ်အိပ်ထဲကနေ ပုဇွန်ချဉ်ထုတ်ကို ယူပါတယ်။
၂-အပေါ်က အဖြူရောင် ပလပ်စတစ်ကို ကတ်ကြေးနဲ့ ဖောက်ပြီးဖြည်ပါတယ်။ အစိမ်းရောင်ကြွပ်ကြွပ်အိပ်လေးနဲ့ ထုတ်ထားတာ ထွက်လာပါတယ်။
၃- အစိမ်းရောင်ကြွပ်ကြွပ်အိပ်လေးကိုဖြည်ပါတယ်။ (ဟွန့် ... ဒီက ဖက်ရှားလို့ ပလပ်စတစ်အိပ်ကို ဖက်နဲ့ပုံမှားရိုက်တယ် မှတ်နေတာ ...) ... ဖက်စစ်စစ်နဲ့ ထုတ်ထားတဲ့ အထုတ်လေး ထွက်လာပါတယ်။
၄- ဖက်စစ်စစ်ကိုဖြည်လိုက်တာ ပုဇွန်ချဉ် တွေ့ရတော့မယ်ပေါ့။ မှားပါတယ်ခင်ညာ။ နောက်ထပ် ဖက်စစ်စစ်တစ်ထုတ် ထွက်လာပါတယ်။
၅- ဖက်စစ်စစ်ကို ဖြည်လိုက်တာ ဒါဖြေရင်တော့ သေချာပေါက် ပုဇွန်ချဉ်တွေ့မယ်ပေါ့။
၆-မှားပြန်ပါတယ် ... ပလပ်စတစ်အဖြူလေးဖြည်ရပါတယ်။ နောက်တစ်ထပ်က အချစ်စစ်စစ်များ .... အဲလေ ဖက်စစ်စစ်များပါပဲခင်ညာ။
၇- အဲဒီဖက်ကို ဖြည်လိုက်တော့မှ ပရိတ်သတ်များ မျှော်လင့်စောင့်စားနေတဲ့ ပုဇွန်ချဉ် စစ်စစ်များ ထွက်လာပါတယ်။ ပုဇွန်ကလဲ လိမ်မော်ရောင်ရေးရေးလေးတွေကို စိတ်ကမှန်းပြီး အော် ပုဇွန်တွေ .... ပုဇွန်တွေလို့ တွေးပြီး စားလိုက်ရပါကြောင်း။
ပုဇွန်ချဉ် လက်တစ်ဆုတ်စာအတွက် ထုတ်ပိုးပစ္စည်းများ။ (ဒါကို ပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိမ်းရေး လုပ်နေတဲ့ Al Gore တို့လို လူတွေ မြင်ရင် လက်ဖျားခါသွားလောက်တယ်။)
Posted by T T Sweet at 11:57 AM
ကိုပေါ August 10, 2010 at 1:24 PM
မြန်မာပြည်မှာ မွေးကတည်းက “အိမ်တွင်းမှုလုပ် သိမ်းထုပ်သေချာ...ဘာညာကွိကွ” သင်ကြားခံကြရတဲ့အလျောက် အကျင့်ပါပြီး အသေအချာ ထုပ်ပိုးရောင်းချလိုက်တာပဲ ဖြစ်မှာပါ။
Ama, U paid 70% for packing
ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ August 10, 2010 at 1:29 PM
ပူးတေမှာ ရန်ကုန်က ပုဇွန်ချဉ် ၂ ထုတ်ကျန်သေးတယ်... မမလို ပလတ်စတစ်တွေတော့ ပါဘူး... ဖတ်ကြီး ကြီး ၂ ရွက်လောက်တော့ပါတယ်... ပြီးတော့ ပုဇွန်ချဉ်... ဒီလိုမှန်းသိရ ပူးတေလာပို့ပေးပါတယ်။ ဘယ်ကိုလာပို့ပေးရမလဲဟင်... ဒီမှာ ဇက်ကြောတွေ တက်နေလို့ စားလို့ရဘူး.....;(
သက်ဝေ August 10, 2010 at 2:14 PM
နေမကောင်းလို့ ဘာမှ မစားနိုင်တာမို့ ပုဇွန်ချဉ်ကို ခပ်တည်တည်ပဲ ကြည့်သွားတယ်...
ဒေါ်ဆွီတီက ထွေလီကာလီတွေ ရှာရှာကြံကြံ စားချင်တာကိုး... ဖက်တွေ အများကြီး ဖြေရတော့တာပေါ့... ဟီးဟီး
T T Sweet August 10, 2010 at 2:38 PM
ကိုပေါရေ ... ဖြေပါတယ် ... တစ်ရာနဲ့တော့ မရဘူး တစ်ထုတ်၂ကျပ်ခွဲဆိုတော့ ၁၈၀၀ လောက်ပေါ့ ...
ပူးတေရေ ... အရင်ကလည်းဝယ်ဖူးပါတယ် ... ဖက်တစ်ထပ်ပါပဲ ... တံဆိတ်တော့ မတူဘူးနဲ့တူတယ် ... သိမ်းထားပူးတေရေ ... အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ ...
အန်တီသက်ဝေ ... မတွေ့တာကြာပြီ ... နေမကောင်းဘူးကိူး။ အင်တ်ိုက်အားတိ်ုက်ကပြချင်ပါသော်လည် ... ကျန်းမာရေးကမကောင်း ... ဆိုတာကိုမြင်သွားတယ်။ အမြန်ကျန်းမာပါစေသော်။
Vista August 10, 2010 at 3:19 PM
ဖက်ပါ သုပ်စားရတဲ့အမျိုးအစားလားမှမသိဒါ တီဆွိကလည်း ဟိ
ညယံ August 10, 2010 at 3:46 PM
တီဆွီ ပုဇွန်ချဉ်ကမှတော်သေးတယ်။ကျွန်မ ဝယ်တဲ့ပုဇွန်ချဉ်ဆို ထမင်းစေ့တွေကို ဆိုးဆေမှုန့်ထည့်ထားတယ်။ပုဇွန်တစ်ကောင်တောင် မမြင်လိုက်ရဘူး။ဂလို စီးပွားရေ ဈေးကွက်မြင်ကြတော့ ကြီးပွားကြတာပေါ့နော်။:(
sy August 10, 2010 at 6:25 PM
ha ha ဖြစ်ရလေ တီဆွိရယ်။ :D
subuueain August 10, 2010 at 6:46 PM
ပုစွန်ချဉ်ကတော့ ကြာလေသေးလေ တီဆွိရေ..
ywartharlay-ytu August 10, 2010 at 9:05 PM
khin oo may August 11, 2010 at 12:23 AM
khin oo may August 11, 2010 at 12:24 AM
Shinlay August 11, 2010 at 12:49 AM
ဟုတ်ပါရဲ့ဖက်ချဉ်ပါလား။
တီတီဆွိ ရဲ.ပုံထဲက ပုဇွန်ချဉ်က ပဲခူးမနီ ဆိုတဲ.နာမည်လားမသိဘူး။
အဲ.လိုမျိုးတပုံစံထဲ ရန်ကုန်က အိုးရှင်းစူပါမားကတ်က ၀ယ်လာပေးတာ ၊ဒီရောက်တော.ဖွင်.ကြည်.တော. တီဆွိပြောသလိုဘဲ သူက ဖက်အစိမ်းရောင်လိုမျိုး စစချင်းမှာ ပလပ်စတစ်အစိမ်းရောင်နဲ.ထုတ်ထားတယ်။
ပြီးတော.မှဖက်တွေဖက်တွေဆိုတာ နည်းတာမဟုတ်ဘူး။ အဲ.ဒီတုံးက ခွာရင်းခွာရင်းနဲ.နောက်ဆုံး ပုဇွန်ချဉ်လေးကိုတွေ.လိုက်ရတော. စိတ်တိုလိုက်တာဆိုတာ။
နောက်ဆို ပုဇွန်ချဉ်ဆိုရင် ရန်ကုန်ကိုလူကြုံနဲ.မှာတာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဲ.လိုနိုင်ငံခြားကမြန်မာဆိုင်တွေမှာဝယ်ရင်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ပဲခူးမနီ ဆိုတဲ.တံဆိပ်တော.ဘယ်တော.မှမ၀ယ်ကြပါနဲ.တော.။
T T Sweet August 11, 2010 at 1:40 AM
မှန်လိုက်လေ အနောနိမတ်စ်ရယ် ... အစ်မလဲ ဖြည်ရင်းနဲ့ ပုဇွန်ချဉ်မှပါရဲ့လားတောင်ထင်တာ။ နောက်ဆုံး ပုဇွန်ချဉ်လေးကိုတွေ.လိုက်ရတော. စိတ်တိုလိုက်တာဆိုတာ။ ထပ်တူထပ်မျှပါပဲ။ စိတ်တိုလွန်းလို့ ပုံထဲတောင်ပထမ ထည့်ရိုက်ပြီးမှ သူများစီးပွား မဖျက်စီးကောင်းပါဘူးလေဆိုပြီး အပေါ်ကနေ တံဆိတ်ကို မမြင်အောင် ပြန်ဖျက်ထားတာ ....
ပိုက်ဆံပေး ဝယ်လာပြီးမှတော့ အညံ့ မခံနဲ့။ အဲဒီဖက်တွေကို ရေနွေးဖျော၊ ရိတ်ရိတ်လှီးပြီး သုတ်စားပေတော့ ..
don't ask ama, it is ဖက်.
ဟုတ်ပါ့ အစ်မရယ်....လွန် လွန်လွန်းတယ်
များများထည့်ပေးရင် များများစားမိပြီး မတည့်မှာ.
့ပဲခူးမနီက ဟိုးအရင်ကတည်းက နာမည်ရတံဆိပ်ထင်တယ်။
ဈေးကြီးပေးဝယ်ရပြီး မြင်ရတဲ့ ငါးချဉ်က လက်ညိုးသာသာလေး...